သင့်ကလေးငယ်မှာ အမှတ်တစ် အမျိုးအစားဆီးချိုရောဂါရှိနေရင် ဘာတွေလုပ်ရမလဲ - Hello Sayarwon
Hello Sayarwon » ဆီးချိုသွေးချို » သင့်ကလေးငယ်မှာ အမှတ်တစ် အမျိုးအစားဆီးချိုရောဂါရှိနေရင် ဘာတွေလုပ်ရမလဲ
ဒါ သင့်အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး။” မိသားစုထဲက တယောက်ယောက်မှာ ဆီးချိုရှိလို့ ငါ့သားလေး/သမီးလေးမှာ ဆီးချိုရှိရတာ” ၊” ငါမတည့်တာတွေ ကျွေးမိလို့ ငါ့ကလေး ဆီးချိုဖြစ်ရတာ” ဒါမှမဟုတ် “ ကလေးစားတတ်သောက်တတ်အောင် ငါသေချာမသင်ပေးမိလို့ ဖြစ်ရတာ” စသဖြင့် လျှောက်တွေးမနေပါနဲ့။မျိုးဗီဇနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကလည်း တစိတ်တဒေသတော့ ပါကောင်းပါ ပါလိမ့်မယ်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ စကျတငျဘာ 5, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း စကျတငျဘာ 5, 2018
1. How to Manage Your Kid’s Type 1 Diabetes. http://www.webmd.com/diabetes/type-1- diabetes-
guide/kid-type- 1-diabetes#1. Accessed February 20, 2017.
2. Your Child Has Type 1 Diabetes, Now What?. http://www.webmd.com/diabetes/features/child-
type-1- diabetes. Accessed February 20, 2017.
3. Type 1 diabetes in children – Coping and support. http://www.mayoclinic.org/diseases-
conditions/type-1- diabetes-in- children/basics/coping-support/con- 20029197. Accessed
ဆီးချိုနှင့် နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများ - အစွန်အဖျား သွေးလွှတ်ကြောများထိခိုက်ခြင်း